Leagoo Elite 1 ကိုသုံးသပ်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း Androidsis
ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံး Android ဆိပ်ကမ်းများ၏ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကို ဆက်လက်၍ ဤကိစ္စတွင်ပြီးပြည့်စုံစွာပြုလုပ်နိုင်သည် Leagoo Elite 1 ပြန်လည်သုံးသပ်ဤအကြောင်းအရာသည်အမှန်တရားရှိကြောင်းအတည်ပြုရန်နှင့်၎င်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့သွားမည့်အရာအားလုံးနှင့်ပတ်သက်သည့်အဖြစ်မှန်ကိုသူတို့အားပြောပြရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အသားများကိုစမ်းသပ်လို။ ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကြားခဲ့ရသောနှင့်ကောင်းစွာကြားရသော terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယူရို ၁၆၀ ပဲရနိုင်တယ်။
ဒီမှာပုံမှန်အတိုင်း Androidsis ပါ, သင်တို့ကိုသင်အမှန်တကယ်သဘောမကျသေးသောဤ Android terminal ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးနှစ်ခုလုံးကိုဖော်ပြလိုသည်။ ၎င်းသည် high-end Android terminal ၏တိကျသောစက္ကူပေါ်ရှိနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်၎င်းအတွက် အံ့မခန်း built-in ကင်မရာများအရှေ့ဘက်တွင်ဘာမျှမပါရှိသော 13 mpx resolution ထက်လျော့နည်းပြီး 16 Mpx resolution ၏နောက်ဖက်တွင်ရှိသည်။ နှစ်ခုလုံးကို Sony ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်.
1 Leagoo Elite 1 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
2 Leagoo Elite 1 ရဲ့အကောင်းဆုံး
3 Leagoo Elite 1 ၏အဆိုးဆုံး
Leagoo Elite 1 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
ပုံစံ Elite 1
ဆောက်လုပ်ရေး အလူမီနီယမ် - မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းနှင့်နီလာကျောက်သလင်းကျောက်ချောများ
SW Android 5.1 Lollipop တွင်ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ထားသည့် Leagoo OS 1.1 အလွှာရှိသည်
ဖန်သားပြင် ၅ လက်မ IPS JDI FullHD5x 1920 Pixels သိပ်သည်းဆ (၄၄၁ dpi) နှင့် LTPS နည်းပညာသည်ဘက်ထရီသုံးစွဲမှု ၂၀% လျော့နည်းမှုနှင့်အတူတောက်ပမှု ၃၀% ပိုပေးသည်။
Processor ကို MTK6753 တွင် 64-bit နည်းပညာနှင့် Core ရှစ်ခုကို 1 Ghz ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသည်
GPU ကို မာလီ T720
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 32 Gb ရှိသည့် micro SD ဖြင့် 64GB အထိထောက်ပံ့နိုင်သည်
ရှေ့ကင်မရာ ၈ mpx (၁၃ ခုသို့ pixel interpolation ဖြင့်ရောက်ရှိသည်။ built-in FlashLED တွင် focal aperture ၂.၄ နှင့် ၇၇ wide ကျယ်သောထောင့်တို့ပါ ၀ င်သည်
နောက်ကင်မရာ ၁၃ mpx (pixels ကို interpolating ဖြင့် 16 mpx သို့ရောက်ရှိသည်) FlasLED တွင် 2.0 focal aperture ပါ ၀ င်သည်
ဆက်သွယ်မှု DualSIM - 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz - 3G: WCDMA 900 / 2100MHz - 4G: FDD-LTE 800/1800/2100 / 2600MHz - Wifi - Bluetooth - Gps နှင့် aGPS - OTG
မီးမောင်းထိုးပြရန်အတွက်အခြားအင်္ဂါရပ်များ Home ခလုတ်မှလက်ဗွေရာဖတ်စက်ကို ၂.၀ လုံခြုံရေးနှင့် ၀.၅ စက္ကန့်အတွင်းအသိအမှတ်ပြုနိုင်ပြီး ၃၆၀ ဒီဂရီအသိအမှတ်ပြုထောင့်ဖြင့် Sapphire crystal နှင့် sensor များဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပြီး ၅၀၈ dpi resolution ရှိနိုင်သည်။
ရှုထောင့် 143'8 x 69'5 x 7'5 မီလီမီတာ
အလေးချိန် 136 ဂရမ်
ဘက်ထရီ 2400 mAh လီသီယမ်အိုင်းယွန်း
Leagoo Elite 1 ရဲ့အကောင်းဆုံး
ယနေ့တွင်အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်သည်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးများကိုမှတ်ချက်ပေးရန်အလွန်ခက်ခဲပါသည် Leagoo Elite ၁, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် high-end Android တွင်ပါ ၀ င်နိုင်သော terminal တစ်ခုကိုရင်ဆိုင်နေရသည်။ Leagoo အမှတ်တံဆိပ်ထွင်းထုမယ့်အစားဆမ်ဆောင်း၊ LG၊ Sony တို့လိုလူသိများတဲ့အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင်ကုန်ကျစရိတ် ၃၅၀ ဝန်းကျင်ရှိမယ့် terminal အကြောင်းပြောမယ်ဆိုပါတော့။ / 350 ယူရို။
နီလာသတ္တုကိုယ်ထည်ပေါ်တွင် sapphire crystal ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်
Gorilla Glass3ကာကွယ်မှုဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားရသော IPS FullHD မျက်နှာပြင်
3 Gb RAM ကို
32 Gb သိုလှောင်မှုပမာဏသည် MicroSD အထောက်အပံ့ဖြင့် 64 Gb အထိရှိသည်
high-end Android terminal ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်သည့်နောက်ကင်မရာ
Android 5.1 တွင်ထူးခြားသောလုပ်ဆောင်မှုဖြင့် terminal ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အပြုအမူ
Leagoo Elite 1 ၏အဆိုးဆုံး
အဆိုးဝါးဆုံးကတော့ဒီကနေငါမီးမောင်းထိုးပြနိုင်တယ် Leagoo Elite ၁ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ သင့်ကိုယ်ပိုင် interface ကို သင်အကျွမ်းတဝင်ရှိလာလျှင်၎င်းသည်အလွန်အလိုလိုသိသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်စင်ကြယ်သော Android မရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အမြင်အာရုံရှုထောင့်မှသာကြည့်လျှင်၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ Google Now Launcher ကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည်။
ဒီတစ်ခုကတပ်မက်လိုချင်သောအရာအတွက်အများဆုံးထွက်ခွာသွားသည် Leagoo Elite ၁, အတွက်သံသယမရှိဘဲဖြစ်ပါတယ် သာ 2400 mAh ၎င်း၏ဘက်ထရီစွမ်းရည်ဘက်ထရီစွမ်းရည်နိမ့်ခြင်းကြောင့်၎င်းကိုတစ်နေ့လုံးအသုံးချနိုင်သော်လည်း ၄ နာရီခန့်မျက်နှာပြင်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်အများစုသည် Android ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်လောင်းကြေးပေးနေသောစံချိန်စံညွှန်းမီ4mAh ကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်များစွာတိုးတက်ခဲ့သည်။ ။
Leagoo Elite ၁
ဖြုတ်။ မရသော 2400 mAh ဘက်ထရီ
Leagoo OS 1.1 interface ကို
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » Leagoo Elite 1 ကိုကြည့်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်
အဖွဲ့ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များစွာကိုအလွန်အမင်းတန်ဖိုးထားခံရသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားတွေ့မြင်ရန်သံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းအလွှာသည် EMUI 3.0 ဖြစ်သည်။ သို့သော် Leagoo မှအလွန်အမင်းပြုပြင်ထားသောကြောင့်စင်ကြယ်စွာ EMUI 3.0 သည် terminal အတွက်အကျိုးရှိသည်။
G4ကိုစပိန်မှာသုံးလို့ရလား။
မိုဘိုင်းကအရမ်းလှတယ်၊ ငါမကြိုက်တာကမျက်နှာပြင်ကိုဝန်းရံထားတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အနက်ရောင်ဘောင်တွေ၊ ဘက်ထရီအရမ်းနည်းတာ
မင်္ဂလာပါ၊ ကြီးမြတ်သုံးသပ်ချက်။ ငါသည်သင်တို့ကို igogo.es နှင့်အတူပူးပေါင်းကြောင်းကြည့်ပါ။ ငါဒီ terminal ကိုအရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်၊ ငါဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာအရမ်းစျေးနှုန်းကြီးကြီးမားမားတွေ့ခဲ့ပေမဲ့ငါ့မေးခွန်းကသဘောင်္ပဲ။ ဘယ်အရည်အသွေးကပိုကောင်းတယ်၊ ပိုမြန်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြနိုင်မလား။ စံအချိန်ကြာမြင့်စွာယူ? ဘာကြောင့်ဒီလူတွေကိုဘာကြောင့်လက်ခံရတာလဲလို့ငါမေးတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးမှာ Standard ပို့ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်သည်ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်ခန့်သာမန်မေးလ်ဖြင့်ရောက်ရှိလာပြီးအကောက်ခွန်ကုန်ကျစရိတ်များကိုအမြဲတစေသက်သာစေပါသည်။
မင်း igogo ကိုမင်းအကြံပေးတယ်ဆိုတာငါမြင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဒီစတိုးဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမကောင်းတဲ့မှတ်ချက်တွေကိုဖတ်ပြီးပြီ။ သူတို့ကိုငါယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့နေရာ (trustPilot) မှာတောင်ဖတ်ဖူးတယ်။ ဤစတိုးဆိုင်သည်ဖောက်သည်အသစ်များအတွက်မကောင်းသော်လည်းကြည့်ရှုရန်အဆင်ပြေပါက unboxing၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းစသည်တို့ကဲ့သို့သောသူများအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ ဘယ်အချိန်မှာငါဖြေနိုင်လဲ ... မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ဒီ Leagoo Elite 1 ဖုန်းကိုကျွန်မလက်ခံရရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဝမ်းသာမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် SIM ကဒ်နှစ်ခုကိုဘယ်လိုထည့်သွင်းမလဲ။ အခြေအနေကကျွန်မကိုအနိုင်ယူပြီး n ° 1 ကိုမစီးနိုင်ခဲ့ဘူး
မင်္ဂလာပါ Eduardo၊ ကျွန်ုပ်သည်ချီလီမှဖြစ်သည်။ ချီလီရှိကွန်ရက်များနှင့်နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုနှင့်မည်သို့သဟဇာတဖြစ်ပါကပစ္စည်းကိရိယာများမည်သို့သွားသည်ကိုသိလိုပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ် ၀ ယ်ယူလိုသော်လည်းရည်ညွှန်းကိုးကားနေဆဲ
ငါ android မှ Fran ကပြုလုပ်သောတရုတ်ဆိပ်ကမ်းအချို့ရှိတရုတ်ဆိပ်ကမ်းရှိဗီဒီယိုကိုကြည့်နေစဉ်သူသည်အနိုင်ရသူနှင့်အမှန်ဖြစ်သည်။
ဒီမိုဘိုင်းကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်၊ အဲဒါကို oukitel k6000 pro နဲ့ဗွီဒီယိုထဲမှာအများကြီးနှိုင်းယှဉ်တယ်။ ငါ့အတွက် k6000 pro ကပိုကောင်းတယ်
Chromecast 2, ပိုမိုမြင့်မားသော resolution, ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူတူပင်စျေးနှုန်း